एमसीसीलाई संसद्‍मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरिरहेका छौं : प्रधानमन्त्री - Naya marga
१ वैशाख,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई बारम्बार संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेपनि रोकिएको बताएका छन् ।
नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन बुधबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्को बहसबारे ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्न नदिएको भनेर असन्तुष्टि जनाए । एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश, बलात्कार र हत्या गर्नेविरुद्धका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न नदिएको भन्दै उनले संसद् र सभामुखप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘एसिड आक्रमणका विरुद्ध अध्यादेश जरुरी बन्यो । एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानुन ल्यायौं । बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्याका विरुद्ध कडा कानुन ल्यायौं । अचम्म, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न दिइएन । संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नपर्ने अध्यादेश नदिएर अप्रिय र असोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कसैसँग फाटो नचाहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताएका थिए । ‘हामी चाहन्छौं फाटोको खेती होइन, आपसमा वैमन्शयता र घृणा होइन आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो,’ उनले भने ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता पुगेको भन्दै रिट खारेज
पछिल्लो २४ घन्टामा ६०३ जनामा कोरोना संक्रमण
२४ घण्टामा ८ हजार ४१८ जना संक्रमण पुष्टि,५३ जनाको मृत्यु
सेयर गर्नुहोस् २५ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप ८४१८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा देशभर गरिएको पीसीआर परीक्षण…
राजनीति समाचार स्वास्थ्य
२४ घण्टामा थपिए ९१९६ कोरोना संक्रमित, ५० को मृत्यु
के प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्लान !
नयाँ मार्ग प्रा.लि. अनलाइन अखबार हो । यसको पक्षधरता सत्य, न्याय र शान्ति हो व्यक्तिको सही सूचना पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै मानव अधिकारको वकालत गर्नु हाम्रो धर्म हो । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा सरकारको स्वेच्छाचरिताविरुद्ध खबरदारी गर्नुका साथै नैतिक एवं सबल राष्ट्र/राज्य निर्माणनै हाम्रो अखबारी अभियान हो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः ८६४/२०७५/०७६
भक्त बहादुर राई
राम कुमार खड्का
बानेश्वोर , काठमाडौँ
समृद्ध मिडिया हब नेपाल प्रा.लि.
Copyright © 2021 Naya marga